VAPET 8000 အော်တိုဘူးလေမှုတ်စက်က တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၈၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း-တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၈၀၀၀
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAPET8000
Do you need to buy pet bottle blowing machine with capacity of 8000 bottles / h?
တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၈၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ဘူးလေမှုတ်စက်ကို လိုအပ်နေပါသလား။
You find the right address to provide pet bottle blowing machine, plastic bottle already! Viet An isaleading reputable supplier of PET bottle blowing machine, the best quality plastic bottle in Vietnam. Currently withacapacity of 8000 bottles / h, you can use the bottle blowing machine model VAPET8000 from Viet An. Make sure you will be extremely satisfied!
သင်က pet ဘူးလေမှုတ်စက်၊ ပလပ်စတစ်ဘူးလေမှုတ်စက်များအတွက် မှန်ကန်သော လိပ်စာကို ရှာတွေ့သွားပါပြီ။ Viet An က pet ဘူးလေမှုတ်စက်၊ ပလပ်စတစ်ဘူးလေမှုတ်စက်များ ပေးပို့တဲ့နေရာမှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၈၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့အတူ Viet An မှ VAPET8000 ဘူးလေမှုတ်စက်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သင် အပြည့်အဝကို စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Your business is looking foraquality pet bottle blowing machine and high productivity, come to Viet An, we will fully meet the most stringent requirements of customers. With the VAPET8000 bottle blowing machine from Viet An, customers can be completely assured and trusted by the VAPET8000 isaplastic bottle blowing machine, industrial pet bottles are used to produce plastic bottles, pet bottles to meet for businesses trading in bottled water, cosmetics, pharmaceuticals, food .... Ensuring quality safety, fully automatic process helps to achieve the highest productivity and save labor costs for businesses.
သင်က သင့်ရဲ့စီးပွါးရေးအတွက် ကွာလတီမြင့်ပြီး ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမြင့်သော ပစ္စည်းကို ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင် Viet An ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ သင့်အတွက် စည်းကမ်းများနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ VAPET8000 ဘူးလေမှုတ်စက်ကို ပေးနေပါတယ်။ VAPET8000 ဘူးလေမှုတ်စက်က ရေဘူးလုပ်ငန်း၊ အလှကုန်၊ ဆေးဝါး၊ အစားအသောက် လုပ်ငန်းများအတွက် ပလပ်စတစ်ဘူးများ၊ pet ဘူးများထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုပါတယ်။ လုံခြုံစိတ်ချမှုကို အာမခံပြီး ထုတ်လုပ်မှုကို အချိန်လျှော့ချပေးခြင်း၊ အလုပ်သမား ကုန်ကျိစရိတ် လျှော့ချခြင်းအတွက် ကူညီပေးပါတယ်။
VAPET8000 isapet bottle blowing machine withacapacity of 8000 bottles / h with the latest Italian technology in 2019 - maximum saving in power consumption, complete assembly at Viet An's factory in Vietnam meeting Iso 9001 standard: 2015 the most rigorous standards available today. Applying automatic feeding technology, the billet is fed from the bottom up continuously without interruption in the production cycle of the enterprise. There is no need for workers to be on duty to put the workpiece into the heater and then transfer the workpiece from the heater to the blower, and after the pet bottle is formed you have to remove the bottle. Automatic is completely different from semi-automatic, right?
VAPET8000 က တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၈၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော pet ဘူးလေမှုတ်စက်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် အီတလီနည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် အင်နာဂျီချွေတာပေးပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ Viet An ကုမ္ပဏီမှာ တပ်ဆင်ထားပြီး ISO 9001:2015 စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ အဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်တဲ့ နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို အောက်ခြေအထိ ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို မနှောင့်ယှက်ဘဲ အဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို အပူပေးစက်ထဲသို့ ထည့်ခြင်း၊ ထိုမှတဆင့် လေမှုတ်စက်ထဲသို့ ပြောင်းပေးခြင်းတို့အတွက် အလုပ်သမား မလိုအပ်ပါဘူး။ pet ဘူး ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်း သင်က ဘူးကို ဖယ်ရှားစရာ မလိုပါဘူး။ အော်တိုက တဝက်အော်တိုနဲ့ အရမ်းခြားနားတယ်မလား။
When you have researched and learned about an automatic pet bottle blowing machine, you certainly know. The bottle, cap and label of the bottle account for 70% - 80% of the value of the bottle. So to be able to increase profits further, you must reduce the bottle cost ofafinished water bottle. To reduce the cost of bottles, the only way is that you have to invest in producing water bottles by yourself. Then you go to find out, buy pet bottle blowing machine, right?
Why should you buy bottle blowing machine VAPET8000 capacity 8000 bottles / h of Viet An. Viet An Day article will introduce to you the automatic bottle blowing machine VAPET8000, but extremely many advantages and useful for businesses to grasp business opportunities in the bottle or bottled water business. vase ... provided by Viet An company.
တစ်နာရီမှာ ဘူးပေါင်း ၈၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Viet An မှ VAPET8000 လေမှုတ်စက်ကို ဘာကြောင့် ဝယ်ယူသင့်တာလဲ။ ဒီဆောင်းပါးတွင် Viet An သည် တဝက်အော်တို VAPET8000 ဘူးလေမှုတ်စက်အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် Viet An မှ ပေးပို့သော ဘူးခွံ၊ ရေ၊ ရေဘူး များအတွက် လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
VAPET8000 bottle blowing machine with capacity of 8000 bottles/h
VAPET8000 တစ်နာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၈၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ဘူးလေမှုတ်စက်
Viet An General Trading Joint Stock Company, formerly known as Viet An general and commercial limited liability company, was equitized since August 2009. Viet An is proud to bealeading enterprise in the field of ice maker, filling machine, bottle blowing machine, bottle blowing machine ... etc.
Viet An General Trading Limited Company လို့ လူသိများခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ Viet An General Trading Stock Company လို့ပြောင်းလဲခဲ့ကာ ရေခဲထုတ်စက်များ၊ RO ရေစစ်များ၊ ဘူးလောင်းဖြည့်စက်များ၊ ဘူးမှုတ်စက်များ၊ ရေစစ်လိုင်းများ စသည်တို့ကို ထုတ်လုပ် တင်ပို့ ရောင်းချတဲ့ နေရာမှာ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။
Therefore, we havealot of competition to set up group forums that slander the reputation of Viet An, saying we are cheating but we are not cheating. Ask the question ifascam business can survive and grow for 20 years? That is definitely not, to prove our business is completelyaquality business customers can look at our customers, the projects and packages we have achieved over the years are The most obvious proof: Large corporations, leading Vietnamese companies, luxury resorts, and 5-star hotels are chosen as reliable partners. We have participated in and won many bidding packages with State investment capital and bidding packages invested with capital from private corporations with the following projects: Diana Bac Ninh Company, Vinamilk Tuyen Quang, Shinhan Vina Company, Lusun Saigon Company, Truong Thinh Company Limited, ZOTA Vietnam Company Limited, Truong Phuoc Company Limited…
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က Viet An က လိမ်ညာနေပါတယ်ဆိုတဲ့ အတင်းအဖျင်းစကားများကို ချေဖျက်ရန် အဖွဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေ ပြုလုပ်ပါတယ်။ အကြံအဖန် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုက နှစ် ၂၀ ကျော် ကြာအောင် ရပ်တည်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုး မေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီက ရရှိခဲ့တဲ့ ဆုတွေ၊ ဝယ်ယူသူများရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး သက်သေပြချက်ကတော့ ကြီးမားသော ပူးပေါင်းမှုများ၊ ထိပ်တန်း ဗီယက်နမ် ကုမ္ပဏီများ၊ အပန်းဖြေစခန်းများ၊ ကြယ် ၅ ပွင့် ဟိုတယ်များ၊ ယုံကြည်ရသော ပါတနာများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Diana Bac Ninh Company, Vinamilk Tuyen Quang, Shinhan Vina Company, Lusun Saigon Company, Truong Thinh Company Limited, ZOTA Vietnam Company Limited, Truong Phuoc Company Limited စတဲ့ ပရောဂျက်များနဲ့ လေလံပက်ကေ့ခ်ျများမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။
With full quality certificates of clear origin, the company has increasingly grown stronger, which will satisfy all customers' needs for construction and installation of products. We will always strive constantly to improve and improve the quality of product services to bring you the maximum benefit possible.
အပြည့်အဝ ကွာလတီ တရားဝင်လက်မှတ်များနဲ့ ကုမ္ပဏီသည် တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာပြီး ဝယ်ယူသူများ၏ ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ တပ်ဆင်ရေး လိုအပ်ချက်များအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှု ရစေမှာာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဝယ်ယူသူများဆီသို့ အကောင်းဆုံး အကျိုးများ ယူဆောင်လာပြီး ဆက်လက် တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။
Not only that, the certificates of merit and certificates of merit from departments and organizations have created more motivation to help Viet An step firmly on the chosen path. Accompanying us is an enthusiastic sales consultant team, ready to meet all of your needs. Our staff are all leading design engineers in Vietnam. We always bring to customers the best drawings, installation, warranty in the shortest time.
ဒါတင် မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဋ္ဌာနများနဲ့ အဖွဲ့အစည်းများဆီမှ အကျိုးဆောင် လက်မှတ်များက Viet An ကို လမ်းကြောင်းပေါ် တင်ပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပူးပေါင်းပေးခြင်းက သင်ရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်အားထက်သန်သော အရောင်းအဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ထမ်းများက ဗီယက်နမ်မှ ထိပ်တန်း ဒီဇိုင်း အင်ဂျင်နီယာများ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဝယ်ယူသူများဆီသို့ အချိန်တိုအတွင်း အကောင်းဆုံး ဒီဇိုင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ အာမခံချက်များ ယူဆောင်လာပေးပါတယ်။
Since its foundation nearly 20 years, Viet An has grown continuously and continuously developed not only in terms of production scale, but also in sales. Currently, Viet An always holds the leading position in the market of Vietnamese bottle shell blowing machine, pet bottle shell, plastic bottle with high annual supply to market. From the first day of establishment, up to now, the number of employees of the company has become very large, covering4branches across the country to meet the needs of customers.
During the history of establishment and development, with the continuous efforts of all Viet An employees, there have been many great achievements & continuously growing strongly, completing the mission to customers, making contributions. significant for the industrial machinery industry in Vietnam and ASEAN countries. With these achievements, Viet An was honored to receive many worthy awards such as:
Automatic bottle blowing machine with capacity of 8000 bottles / h
တစ်နာရာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၈၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော အော်တိုဘူးလေမှုတ်စက်
The VAPET8000 pet bottle blowing machine is applied Italy's No.1 advanced bottle blowing technology, completed at Viet An factory according to ISO 9001: 2015 standards. With this pet bottle blowing machine, blowing plastic bottles, agencies will have the best quality products for their production as well as supply bottles, pet bottles, plastic bottles for the market. with reasonable price and guaranteed quality. Due to beingafully automatic blowing machine line, the VAPET8000 bottle blowing machine is fully automatic feeding, the bottle preform will be automatically arranged in the correct head by the bottle preform loading machine (not reversed) in the order of entering the heater. After being heated in the heater, you will seeablowing machine to blow. The number 8000 corresponds to the capacity of 8000 bottles/hour that the machine can blow.
VAPET 8000 ဘူးလေမှုတ်စက်တွင် US နံပါတ် ၁ ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့ နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပြီး Viet An စက်ရုံတွင် ISO 9001:2015 စံချိန်စံနှုန်းနဲ့အညီ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒီ လေမှုတ်စက်နဲ့ဆိုရင် အေဂျင်စီများက ၄င်းတို့ရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အကောင်းဆုံး ကွာလတီပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ပြီး ဈေးကွက်မှာ ဘူးများ၊ pet ဘူးများ၊ ပလပ်စတစ်ဘူးများကို သင့်တော်သော ဈေးနှုန်း၊ အာမခံချက်ရှိသော ကွာလတီဖြင့် ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် VAPET8000 အော်တို ဘူးလေမှုတ်စက်က အော်တိုလုပ်ဆောင်နို်င်အောင် တပ်ဆင်ထားပြီး ဘူးအကြိုပုံသွင်းခြင်းကို အပူပေးစက်ထဲသို့ ထည့်ရန် အော်တိုဘူးများကို သယ်ပေးသောစက် (ပြောင်းပြန်မဟုတ်ပါ) ဖြင့် မှန်ကန်သော ခေါင်းနေရာတွင် စီပါတယ်။ နံပါတ် ၈၀၀၀ က စက်ဖြင့် လေမှုတ်နိုင်သော တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၈၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ သင့်တော်ပါတယ်။
အော်တို VAPET8000 ဘူးလေမှုတ်စက်၏ပုံ
The bottle blowing machine system (Must buy) VAPET8000 from Viet An includes:
Viet An မှ VAPET8000 ဘူးလေမှုတ်စက်တွင်……
A. Host systems (blowers and heaters)
အဓိက စနစ် (လေမှုတ်စက်များနှင့် အပူပေးစက်များ)
အော်တိုလေမှုတ်စက် VAPET8000 ၏ပုံ
၃၅၀ မီလီလီတာ ဘူးများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 6500-8000
၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူးများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 6200-8000
၁၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူးများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 4800-5800
လေမှုတ်ခေါင်းတစ်ခု၏ အများဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 3750
အပူပေးခြင်း လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 40
ပုံစံခွက် ပိတ်ပေးသော အား 850
လေမှုတ်စက် အရွယ်အစား 3980*2050*2200
The VAPET8000 fully automatic bottle blowing machine has an automatic bottle feeding unit. You just need to pour the bottle preform into the barrel. The preform loader automatically loads the bottle preform and arranges it and puts it in the heater.
VAPET8000 အပြည့် အော်တိုဘူးလေမှုတ်စက်မှာ အော်တို လုပ်ဆောင်သော ယူနစ် ပါရှိပါတယ်။ သင်က ဘူးအကြိုပုံသွင်းခြင်းကို စည်းပိုင်းထဲသို့ ထည့်ပေးရုံပါပဲ။ အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို သယ်ပေးသော စက်က အော်တိုသယ်ဆောင်သွားပြီး ၄င်းကို အပူပေးစက်ထဲသို့ ထည့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Heating machine in the VAPET8000 bottle blowing machine system: has the effect of heating the Preform and distributing heat evenly on the surface of the Preform. This heater heats 2000-2000 preform of 350ml and 500ml sizes. As for the 1500ml bottle preform, the heater can heat 1500-1800 preform. Then the surface of the bottle is expanded evenly so that it can be transferred to the server department to blow out the standard bottles. Minimize the error of the finished product.
Bottle blowing machine: Including blowing part and bottle mold part. Thanks to the compressed air of the air compressor, the blank, which is evenly expanded from the machine to the heat, is fed into the molding part of the blower. Then the lungs will blow air from the high-pressure air compressor after being filtered and dried in, causing the embryo to deform into bottles, 350 ml bottle shell correct to the shape of the mold. This VAPET8000 blower blows 2000-2000 bottles of 350ml and 500ml sizes within 1 hour. As for 1500ml bottles, this machine can blow 1500-1800 bottles within 1 hour. If you want to still use this 350 ml bottle blowing machine to blow 500ml bottles, for bottles smaller than 1500 ml, you must use other blowers and molds. And you can contact Viet An for private reservation.
B. The auxiliary equipment of the bottle blowing machine hasacapacity of 8000 bottles/h
တစ်နာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၈၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ဘူးလေမှုတ်စက်၏ အကူ ပစ္စည်းများ
လျှပ်စစ်ပါဝါ Kw 22*2
လေဖိသိပ်စက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း M3/min 4/8
အလေးချိန် KG 2000
The high pressure compressor of the VAPET8000 bottle blowing system is responsible for generating high pressure air flow, providing high pressure air to blow out beautiful bottles.
VAPET8000 ဖိအားမြင့် လေဖိသိပ်စက်က ဖိအားမြင့် လေစီးကြောင်း ဖန်တီးပေးတယ်။ လေမှုတ်ရန် ဖိအားမြင့်သော လေ ပေးတယ်။
လေအေးစစ်ထုတ်ကိရိယာ Unit Number
Air filter: The air filter of the VAPET8000 bottle blower is mounted behind the air tank (also known as the air tank). The air filter works to filter the air and clean the air before it is fed into the air dryer. It is very important that the air is cleaned when the bottle finish is defective.
Above is the system of blowing machine VAPET8000 of Viet An.
အပေါ်က ဖော်ပြထားခဲ့တာက Viet An မှ VAPET8000 လေမှုတ်စက်၏ စနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖိအားနည်းသော လေဖိသိပ်စက် Unit Number
လေဖိသိပ်နိုင်စွမ်း M3/min 1/6
The low-pressure compressor of the VAPET8000 bottle blowing system is responsible for creating high-pressure air flow, providing high pressure to blow out the right bottles of the right size, extremely beautiful design.
VAPET8000 လေမှုတ်စက်ရဲ့ ဖိအားနည်းသော ဖိသိပ်စက်က ဖိအားများသော လေစီးကြောင်းကို ဖန်တီးခြင်း၊ မှန်ကန်သော အရွယ်အစား၊ အလွန်လှပသော ဒီဇိုင်းဘူးများအတွက် လေမှုတ်ရန် အားပြင်းသော ဖိအား ပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
တင်ပို့ထားသော အလူမီနီယမ် ပုံစံခွက် ၃၅၀ မီလီလီတာ 3300 USD
တင်ပို့ထားသော အလူမီနီယမ် ပုံစံခွက် ၅၀၀ မီလီလီတာ 3300 USD
တင်ပို့ထားသော အလူမီနီယမ် ပုံစံခွက် ၁၀၀၀ မီလီလီတာ 3400 USD
တင်ပို့ထားသော အလူမီနီယမ် ပုံစံခွက် ၁၅၀၀ မီလီလီတာ 3500 USD
Viet An အလူမီနီယမ် ပုံစံခွက်က ၃၅၀ မီလီလီတာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ 2200 USD
Viet An အလူမီနီယမ် ပုံစံခွက်က ၅၀၀ မီလီလီတာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ 2200 USD
Viet An အလူမီနီယမ် ပုံစံခွက်က ၁၀၀၀ မီလီလီတာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ 2300 USD
Viet An အလူမီနီယမ် ပုံစံခွက်က ၁၅၀၀ မီလီလီတာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ 2400 USD
Process of blowing bottle VAPET8000 provided by Viet An
Viet An မှ ယူဆောင်လာသော VAPET8000 ဘူးလေမှုတ်စက်၏ လုပ်ဆောင်ပုံ
What will you receive when buying VAPET8000 bottle blowing machine from Viet An?
Viet An မှ ယူဆောင်လာသော VAPET8000 ဘူးလေမှုတ်စက်၏ ကောင်းကျိုးများ
The VAPET8000 bottle blowing machine has the lowest error rate! There is no machine on the Vietnamese market today that can guarantee suchalow rate of finished bottle errors. It helps to reduce the cost of your finished product significantly.
VAPET8000 bottle blowing machine uses the latest Italian technology, so it is extremely energy-efficient. Reducing the cost of the bottle, helping you to compete very well with the market, without having to worry about price competition.
၃၅၀ မိလီမီတာ၊ ၅၀၀ မီလီမီတာ၊ ၁၅၀၀ မီလီမီတာ ဘူးလေမှုတ်စက်များရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေက ဈေးကွက်မှာ ဈေးအပေါဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ VAPET8000 ဘူးလေမှုတ်စက်က အပျက်အစီး အရှိန်နှုန်း အနည်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်ဈေးကွက်မှာ အခုလိုမျိုး ပျက်စီးမှု အရှိန်နှုန်း အနည်းဆုံးဖြစ်သော ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ ဘူးများကို အာမခံတဲ့ စက် မရှိပါဘူး။ ၄င်းက ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ ပစ္စည်းရဲက ကုန်ကျငွေကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ VAPET 8000 ဘူးလေမှုတ်စက်က နောက်ဆုံးပေါ် အီတလီနည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် အင်နာဂျီအတွက် အလွန် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဘူး၏ ကုန်ကျငွေကို လျှော့ချလိုက်မယ်ဆိုရင် သင့်ကို ဈေးနှုန်းပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘဲ ဈေးကွက်မှာ နေရာရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘူးလေမှုတ်စက်ကို အလွန် တည်ငြိမ်တဲ့ ကွန်ပြူတာ ထိန်းချုပ်စနစ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ လုံခြုံသော လော့နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် ပြသနာ တစုံတရာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရင် အော်တို မတပ်ဆင်ဘဲ နေပါတယ်။
The bottle blowing machine provided by Viet An is the only machine on the market withamechanism to blow bottles and bottles. This mechanism is tailored by Viet An according to the needs of each customer.
The VAPET8000 bottle blowing machine is also compact and does not take up space. Make your workshop space clean and airy.
VAPET8000 ဘူးလေမှုတ်စက်ကို နေရာမပြုန်းတီးစေရန် သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်း ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အလုပ်ရုံနေရာကို သန့်ရှင်းစေပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိစေပါတယ်။ ၂၀ လီတာ ဘူးမှုတ်ကိရိယာက ၁၂ လ အာမခံချက်ရှိပါတယ်။ ရောင်းချပြီးနောက် ဆားဗစ်ကလည်း အလွန် ကောင်းပါတယ်။
Note when using the bottle blowing machine VAPET8000 of Viet An
Viet An ၏ ဘူးလေမှုတ်စက်ကို အသုံးပြုသောအခါ မှတ်သားထားရမည်များ
You should regularly clean the VAPET8000 automatic bottle blowing machine. Regularly clean the VAPET2200 bottle blowing machine. To help the bottle blowing machine not to rust, as well as ensure the safety of the finished bottle.
The bottle blowing machine of Viet An meets ISO 9001: 2015 quality standards
Viet An ၏ ဘူးလေမှုတ်စက်က ISO 9001: 2015 ကွာလတီ စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
Customers who buy the bottle blowing machine VAPET8000 from Viet An will be transported and installed free of charge with 1 year machine warranty and long-term maintenance. Withateam of professional technicians with high experience in the profession, we will give customers the best conditions for mutual benefits.
If you haveademand for bottle blowing machine VAPET8000 please contact: 0949.41.41.41 for the best advice! Wishing you good health.
Viet An ရဲ့ VAPET 8000 ကို ဝယ်ယူသူများသည် အခမဲ့ပို့ဆောင် တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊ တစ်နှစ် အာမခံချက်၊ ကာလကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုတို့ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ပြီး အတွေ့အကြုံများသော နည်းပညာအသင်းမှ ဝယ်ယူသူများအတွက် အကောင်းဆုံး အခြေအနေကို လမ်းညွှန်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့သင်က ဘူးလေမှုတ်စက် VAPET8000 ကို ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် ၀၉- ၄၉ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ကို ဆက်သွယ်ပြီး အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ် ရယူလိုက်ပါ။ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
VAPET8000 Bottle Blowing System Specifications (Must-Buy)
VAPET8000 ဘူးလေမှုတ်စက် ဖော်ပြချက်များ (မဝယ်မနေရ)
ဖိသိပ်နိုင်သော ဖိအား 30
အထွေထွေ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ 5.0m³/3.0Mpa
စက်၏ အတိုင်းအတာ 1140*735*1260
စက်၏ အတိုင်းအတာ 600*2000
Hỏi đáp & đánh giá VAPET8000 ဘူးလေမှုတ်စက်